“Waxaan codsaday inaan ka tago Atletico Madrid, sida uu sameeyay Gabi”… Filipe Luís – Gool FM
(Atletico) 05 Sab 2018. Difaaca kooxda Atletico Madrid Filipe Luís ayaa wuxuu xaqiijiyay in Paris Saint-Germain ay u soo gudbisay dalab rasmi ah inta lagu jiray suuqan xagaaga si ay ula soo saxiixdaan.
Laakiin difaaca reer Brazil ee Filipe Luís ayaa sheegay in maamulka kooxda Atletico Madrid ay ka diideen u dhaqaaqista PSG, inkastoo uu laacibka doonayay inuu baxo.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa si rasmi ah u dalbatay saxiixa 33 jirka Atletico Madrid, kahor inta uusan xirmin suuqa xagaaga. Laakiin ugu dambeyn maamulka kooxda reer Spain ayaa waxay ku adkeysteen inay iska diidaan heshiiskan.
Filipe Luís ayaa dhinaca kale sheegay in maamulka Atletico Madrid uu ka codsaday inay u ogolaadaan inuu baxo sida uu sameeyay kabtankii hore kooxda Gabi.
“Waxaa jiray fursado badan aan ugu dhaqaaqi karay kooxda Paris Saint-Germain, waxaan sidaas u sheegay maamulka kooxda Atletico Madrid”.
“Waxaan ka codsaday maamulka Atletico Madrid inay kooxda iga fasaxaan, sida ay u sameeyeen kabtankii hore ee Gabi, laakiin waxay door bideen inaan kooxda kusii sugnaado”.
Julen Lopetegui oo qorshe nasiino la'aan ah u dajiyay Marcelo